သင့်ရဲ့စာသင်ခန်းထဲမှာမြန်မာကျောင်းသားများသှနျသငျဖို့ကိုဘယ်လို | USAHello
ပြန်လည်နေရာချထားဒုက္ခသည်တွေကိုသူတို့မွေးဖွားရပ်ကြီးရာမဲလစခန်းသို့သွားရောက်. ကုလသမဂ္ဂဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာမဟာမင်းကြီးရုံး UNHCR / K သည် Suntayodom နေဖြင့်ဓာတ်ပုံ
Resettled refugees visit Mae La camp where they were born and bred. Photo by UNHCR/K Suntayodom
ဒီပရိုဖိုင်းကိုလူမျိုးစုဗမာလူမျိုးနေသောမြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့်ကျောင်းသားများကိုအကြောင်း ကျေးဇူးပြု. သတိပြုပါ. မြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့်အမေရိကန်အတွက်ဒုက္ခသည်အများစုမှာကရင်လူမျိုးများမှာ, ကရင်နီ, သို့မဟုတ် Rohingya – ဤအအုပ်စုများအတွက်သီးခြားနောက်ခံ profile များကိုကြည့်ရှု.
Please note this profile is about students from Burma who are ethnically Burman. The majority of refugees in the US from Burma are Karen, Karenni, or Rohingya – see separate background profiles for these groups.
အနည်းငယ်သာရန်ပုံငွေပညာရေးအားပေးပြီးမှနေစဉ်, တစ်ဦးချင်းစီအစွမ်းကုန်လေးစားမှုရာထူးအတွက်အလွန်အမင်းတန်ဖိုးပညာရေးနှင့်နေရာဆရာများလေ့. မြန်မာပြည်ပညာရေးအကြီးအကျယ်ကိုနိုင်ငံရေးအရ-The ဖြစ်ပါတယ်သင်ရိုးညွှန်းတမ်းအစိုးရကထိန်းချုပ်ထားကြသည်, နှင့်ကျောင်းပညာရေးကိုမကြာခဏတိုင်းရင်းသားခွဲခြားဆက်ဆံမှုစည်းကြပ်ရန်အသုံးပြုသည်. တိုင်းရင်းသားရေးရာလူမျိုးသူတို့ကိုယ်ပိုင်ဘာသာစကားနှင့်ယဉ်ကျေးမှုသင်ယူဖို့ခွင့်ပြုခဲ့ကြသည်မဟုတ်. စစ်တပ်အစိုးရကဘယ်လိုသူပုန်ရန်သင်ယူခြင်းကနေကျောင်းသားများကိုတားဆီးဖို့ tool အဖြစ်ပညာရေးကိုအသုံးပြု. ယနေ့တွင်ပညာရေးနေဆဲအားလုံးအဆင့်ဆင့်ကိုအစိုးရကထိန်းချုပ်ထားသည်.
While very little funding is given to education, individuals tend to highly value education and place teachers in positions of utmost respect. Education in Burma is heavily politicized—the curricula are controlled by the government, and schooling is often used to impose ethnic discrimination. Ethnic peoples are not allowed to learn their own language and culture. The military government used education asatool to prevent students from learning how to rebel. Today education is still controlled by the government at all levels.
ကျေးလက်ဒေသတွင်သို့မဟုတ်ဆင်းရဲတဲ့မိသားစုကနေကလေးများကျောင်းကတက်ရောက်ခဲ့သည်ရှိသည်ဟုလျော့နည်းများပါတယ်. ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 40% သားသမီးများ၏ကျောင်းတက်ခန့်ကြဘူး 75% သူတို့ရဲ့မူလတန်းပညာရေးကိုဖြည့်ကြဘူး [ဦးသိန်းလွင်, 2003]. ဘုန်းတော်ကြီးသင်စာသင်ကျောင်းဝင်ငွေနည်းမိသားစုများအတွက်အချို့ပညာရေးပေး.
Children in rural areas or from poor families are less likely to have attended school. Approximately 40% of children do not attend school and about 75% do not complete their primary education [Thein Lwin, 2003]. Monastic schools provide some education for low-income families.
ကျောင်းများပုံမှန်အားဖြင့်အတန်ငယ်အကျင့်ပျက်ခြစားမှုများမှာ. အတော်များများဆရာများလုံလောက်သောလေ့ကျင့်ရေးခဲ့ကြပြီမဟုတ်ခြင်းနှင့်လာဘ်ကိုလက်ခံပါလိမ့်မယ်. ဆရာများမကြာခဏသော authoritative ဖြစ်ကြပြီးကျောင်းသားများကိုနာခံမှုနှင့်ရိုသေလေးစားမှုကိုပြသလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်နေကြသည်. အများဆုံးစာသင်ခန်း၌ဆုံးမဩဝါဒ "ခေါ်ဆိုခများနှင့်တုန့်ပြန်" စတိုင်များကလွှမ်းမိုးနေသည်, ကျောင်းသားများနှင့်ဆရာအကြားအလွန်ကန့်သတ်အပြန်အလှန်အတူ. ကျောင်းသားများအချက်အလက်များအလွတ်ကျက်ဖို့မျှော်လင့်ရသည်နှင့်ဖွယ်ရှိဝေဖန်စဉ်းစားတွေးခေါ်၏နည်းနည်းနားလည်မှုရှိသည်လိမ့်မယ်.
Schools are typically somewhat corrupt. Many teachers have not had adequate training and will accept bribes. Teachers are often authoritative and students are expected to show obedience and respect. Teaching in most classrooms is dominated by “call and response” styles, with very limited interaction between students and teacher. Students are expected to memorize facts and will likely have little understanding of critical thinking.
Among Burmese Americans, enrollment in higher education shows almost equal numbers of females and males.
အစဉ်အလာ, မြန်မာမိသားစုအမည်များကိုမရှိဘူး. ဋ္ဌေးမောင်အမည်ရှိသောသူကိုဝင်းဆွေမြင့်ကအမည်ရှိသောဇနီးရှိသည်နှင့်ချိုဇင်နွယ်နှင့်ကိုသန်းမောင်ကအမည်ရှိကလေးနှစ်ယောက်စေခြင်းငှါ,. အမည်များကိုမျှအခြားသူများအားမည်သည့်ဆက်ဆံရေးမျိုးရှိပါတယ်; တစ်ဦးချင်းစီတဦးချင်းဖြစ်ပါသည်. ဗမာအနောကျပိုငျးနိုင်ငံများရှိပုံစံများကိုဖြည့်ဖို့တောင်းကြသောအခါမျိုးရိုးအမည်မရှိခြင်းပြဿနာများကိုဖန်တီးပေး.
Traditionally, Burmese do not have family names. A man named Htay Maung might haveawife named Win Swe Myint and two children named Cho Zin Nwe and Than Tut. None of the names has any relationship to the others; each is individual. The absence of surnames creates problems when Burmese are asked to fill in forms in Western countries.
လူမျိုးစုဗမာလူမျိုးပြင်းထန်သည့်နိုင်ငံရေးညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုတွေ့ကြုံသောသူမိဘများရှိစေခြင်းငှါသူသည်သင်၏စာသင်ခန်းထဲမှာကျောင်းသားများ, သူတို့ကိုယ်တိုင် US မှာမွေးဖွားသို့မဟုတ်၎င်းတို့၏မိသားစုများကိုအမေရိကန်ရောက်လာသောအခါအလွန်ငယ်ရွယ်ခဲ့ကြပြီဖြစ်နိုင်သည်သော်လည်း. မြန်မာနိုင်ငံတွင်းရှိအရွယ်ရောက်ပြီးသူ၏စာတတ်မြောက်မှုနှုန်းခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်ခန့်မှန်းကြသည် 60%. သို့သော်, အမေရိကန်မြန်မာလူကြီးများပျမ်းမျှဗမာလူမျိုးထက်ပိုပြီးပညာတတ်ဖြစ်ဖို့များပါတယ်.
Students in your classroom who are ethnically Burman may have parents who experienced severe political persecution, though they themselves may have been born in the US or been very young when their families came to the US. Literacy rates of adults in Burma are estimated at approximately 60%. However, Burmese adults in the US are likely to be more educated than the average Burman.
အသက်ကြီးသူကိုလေးစားအရေးကြီးပါတယ်: အသက်အရွယ်နုပျိုသောပုဂ္ဂိုလ်များတစ်ခန်းတည်းရှိအကြီးအကဲတစ်ဦး၏ထက်ပိုမိုမြင့်မားတဲ့အဆင့်မှာထိုင်ကြဘူး, မဟုတ်သလိုသူတို့အကွီးအကဲမြားမှာညွှန်ပြမိမိတို့၏ခြေနှင့်ထိုင်ကြဘူး. ခြေကိုယ်ခန္ဓာ၏အနည်းဆုံးမြတ်သောတစိတ်တပိုင်းအဖြစ်မှတ်ယူကြသည်, နှင့်သင့်လေးစားမှုထိုက်သောသူတစ်ဦးဦးဆီသို့သူတို့ကိုထောက်ပြဖို့မလေးစားသည်. တစ်ခုခုပေးဖို့နှစ်ဦးစလုံးတို့သည်လက်ကိုသုံးပါ, နှင့်ဆီကတစ်ခုခုလက်ခံရရှိ, အဟောင်းလူတစ်ဦး.
Respect for elders is important: Younger persons do not sit atalevel higher than that of an elder in the same room, nor do they sit with their feet pointing at elders. The feet are regarded as the least noble part of the body, and it is disrespectful to point them toward someone deserving your respect. Use both hands to give something to, and receive something from, an older person.
ခေါင်းပေါ်မှာကလူမထိမခိုက်, ကိုယ်ခန္ဓာ၏ဝိညာဉ်အားဖြင့်အမြင့်ဆုံးအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဟုယူဆသော. ရိုသေလေးစားမှုနှင့်အတူဗုဒ္ဓဘာသာဘုန်းတော်ကြီးများနှင့်သံဃာတော်များပုံရိပ်နှင့်အရာဝတ္ထုဆက်ဆံပါ. ဥပမာ, တဦးတည်းပုံမှန်အားဖြင့်တစ်ဦးဗုဒ္ဓပုံရိပ်အထက်တွင်အရာဝတ္ထုနေရာမဟုတ်ဘူး.
Don’t touch people on the head, which is considered the spiritually highest part of the body. Treat Buddhist monks and monk imagery and objects with respect. For example, one would not normally place objects aboveaBuddha image.
မိသားစု, ချက်ချင်းတိုးချဲ့နှစ်ဦးစလုံး, ဗမာလူမျိုးအသက်တာ၌အရေးကြီးဆုံးလူမှုရေးယူနစ်ဖြစ်ပါတယ်. အန်ကယ်ကြီးများ, အဒေါ်, နှင့်ဝမ်းကွဲတိုးချဲ့မိသားစုအစီအစဉ်များအောက်တွင်အတူတကွနေထိုင်စေခြင်းငှါ. မိခင်အများအားဖြင့်နေ့စဉ်အိမ်မှုဝေယျာ၏စောင့်ရှောက်မှုကြာ, သမီးတို့သို့မဟုတ်လက်မထပ်ရသေးအစ်မတွေအားဖြင့်ကူညီပေးခဲ့သည်. အထီးဦးစားပေး-သူတို့ သာ. ကွီးမွတျအခွင့်အာဏာကိုင်စွဲထားသော, နှင့်ရိုသေခြင်းပြနေကြသည်. မိသားစုနှင့်အတူနေထိုင်နေအဘိုးအဘွားကိုလည်းရိုသေခြင်းပြနေကြသည်.
The family, both immediate and extended, is the most important social unit in Burman life. Uncles, aunts, and cousins may live together under extended family arrangements. The mother usually takes care of the daily chores, helped by daughters or unmarried sisters. Males have priority—they wield greater authority, and are shown deference. Grandparents living with the family are also shown deference.
BRYCS အရင်းအမြစ်များ: မြန်မာပေါ် Highlighted အရင်းအမြစ်များစာရင်း
BRYCS RESOURCES: List of Highlighted Resources on the Burmese
https://ethnomed.org/culture/other-groups/burmese/Burmese ဒုက္ခသည်ကျန်းမာရေး 2_3_16 နောက်ဆုံး DGMQ.pdf / အမြင်ကိုယ်ရေး?ရှာဖွေရေး = အဘယ်သူမျှမ
https://ethnomed.org/culture/other-groups/burmese/Burmese Refugee Health Profile 2_3_16 FINAL DGMQ.pdf/view?searchterm=None
သငျသညျမှတ်ချက်များသို့မဟုတ်နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များကိုသို့မဟုတ်စိတ်ကူးများရှိပါကမြန်မာကျောင်းသားများကိုဆုံးမဩဝါဒ ပေး. အပေါ်ဝေမျှဖို့, အီးမေးလ်ပို့ပါ: info@usahello.org.
If you have comments or additional information or ideas to share on teaching Burmese students, please email: info@usahello.org.
သင်ဤဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပြီး print ထုတ်နိုင်ပါတယ် မြန်မာသင်ယူသူပရိုဖိုင်းကို PDF အဖြစ်နှင့်သင့်စာသင်ခန်းထဲမှာတစ်ဦးအရင်းအမြစ်အဖြစ်စောင့်ရှောက်.
You can download and print this Burmese learner profile asaPDF and keep it asaresource in your classroom.